Sunday May 12, 2019 - 11:58:18 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar shalay gelinkii dambe ka dhacay deegaan kaabiga ku haya degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Weerarka oo ay qaadeen ciidamo katirsan Xarakada Al Shabaab ayaa lagu beegsaday goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen saraakiil ciidan iyo mas'uuliyiin katirsan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose uqaabilsan dowladda Federaalka.
Ilo wareedyo ayaa xaqiijinaya in weerarka lagu dilay 2 katirsan maleeshiyaadka dowladda ee Mareykanku tababaray kuwaas oo ku sugnaa tuulada Sabiid, waxaa weerarka si dirqi ah uga badbaaday guddoomiyaha degmada Afgooye iyo Saraakiil ciidan ah.
Warar lagu kalsoonyahay waxay sheegayaan in guddoomiyaha degmada Afgooye uu isku tuuray Wabiga markii rasaastu ka bilaabay halkii uu fadhiyay oo aheyd jiinka wabiga Shabelle, xaaladda caafimaad ee guddoomiyaha degmada Afgooye ayaa laga dayrinayaa wuxuuna ka sheeganayaa dhaawacyo jirkiisa gaaray.
Xoogaga Al Shabaab ayaa gudaha ugalay deegaanka Sabiid halkaas oo bishii lasoo dhaafay ay ciidamo Mareykan iyo AMISOM ah geeyeen maleeshiyaadka Bangaraafta balse deegaanka waxaa si joogta ah uga dhacaya weeraro ay geysanayaan dagaalyahannada Al Shabaab.